🌲 သဘာဝဘေးမဲ့တော | Hultsfred သို့သွားပါ။
၎င်းသည်အလှဆုံးသောအချိန်တွင်Småland၏မှော်သဘာဝကိုခံစားကြည့်ပါ။ အစဉ်အဆက်မထိန်းသိမ်းရသေးသောမှော်သစ်တောများ၊ တောက်ပသောရေကန်များနှင့်ကြီးမားသော၊ ရေညှိဖုံးလွှမ်းထားသောကျောက်ဆောင်များ။ အားလုံးအပင်များနှင့်တိရိစ္ဆာန်များကြွယ်ဝ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မြှို့နယ်သို့လည်ပတ်ရန်သဘာ ၀ သိုက် ၁၁ ခုရှိသည်ကိုသင်သိပါသလား။
Alkärretသဘာဝအရံသည်မျိုးစိတ်ပေါကြွယ်ဝသောသစ်တောပတ်ဝန်းကျင်တွင်တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးဖားများ၊ ဆလာမန်နှင့်အခြားရေနေသတ္တဝါများနှင့်ရေပန်းစားသည်။ ကောင်းသောအာဟာရထောက်ပံ့မှုကိုကျေးဇူးတင်နှင့်
Knästorpsသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးသည်မတူညီသောareaရိယာအမျိုးမျိုးဖြစ်ပြီးသဘာဝသစ်တောကဲ့သို့သောရောနှောထားသောသစ်တော၊ သပိတ်ပင်၊ မီးသင်္ချိုင်းထင်းရှူးသစ်တော၊ Knstorps သဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေတွင် ၁၈ ရာစုကျေးရွာ၏ရုပ်ကြွင်းများရှိသည်
Lunden သဘာ ၀ သိုက် - Smålandသဘာဝအလှအပသည်အလွန်လှပသည်။ Lunden သဘာ ၀ သယံဇာတသည်အရပ်ရှည်။ လှပသောကျောက်စရစ်ခဲတောင်ဖြစ်သည်။ ခေါင်ကတစ်ခုပါ
Slagdala သဘာဝသယံဇာတသည် Virserum တောင်တန်း၏အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပြီးဆွီဒင်တောင်ပိုင်း၏အင်အားအကောင်းဆုံးခေါင်ဖျားဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရေခဲစာရွက်အကြောင်းကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း 10 ဆုတ်ခွာသောအခါ
Ryningen သည် ဆွီဒင်အရှေ့တောင်ပိုင်းရှိ အကြီးဆုံးဟု ဆိုထားသော ရေတိမ်ဒေသများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 300 ဟက်တာဧရိယာသည် Hultsfred နှင့် Högsby မြူနီစီပယ်ကြားတွင်တည်ရှိသည်
Hulingsryd သည် Hulingen ရေကန်၏မြောက်ဘက်တွင်တည်ရှိပြီးအမိုးအကာရှိသောမြစ်ဝန်းကျင်၊ ကမ်းခြေသစ်တောများ၊ ခြောက်သွေ့သောထင်းရှူးသစ်တောများ၊ ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းများသည်ယနေ့ဖြစ်သည်
Länsmansgårdsängenသဘာဝထိန်းသိမ်းရေးနယ်မြေသည်Virserumssjönဘေးတွင်လူကြိုက်များသောလမ်းလျှောက်areaရိယာဖြစ်ပြီးရှေးဟောင်းနှင့်လှပသောစမ်းရေတွင်းများစွာရှိသည်။ အိုင်ထဲသို့ဆင်းသောရိယာ၌, ဘုစပတ်၏ဒြပ်စင်နှင့်အတူပေါက်နေသည်
Kraskögle တွင်၊ သစ်တောများသည် မျိုးဆက်ပေါင်းများစွာ မထိမထိ ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်သည် ရေခဲပြင်များ အရည်ပျော်ခြင်း၏ ခြေရာခံတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤအမျိုးအစားနှင့် အရွယ်အစားရှိသော သဘာဝသစ်တောများသည် ၎င်းတွင် အထူးအဆန်းဖြစ်သည်။
Grönudde ဧရိယာတစ်ခုလုံးတွင် သဘာဝသစ်တောအသွင်အပြင်၊ အလားတူ ရှေးဦးခေတ်သစ်တောတစ်ခုရှိသည်။ ထိုဒေသရှိ သစ်တောများတွင် ထူထပ်သော ထင်းရှူးသစ်တောနှင့် spruce နှင့် ကြီးစိုးထားသည့် ရောနှောထားသော ကော်နီဖာဟောင်းသစ်တောများ ပါဝင်သည်။
Sällevadsån ချိုင့်ဝှမ်းတွင် ဆွီဒင်နိုင်ငံ၏ မျိုးတုံးပျောက်ကွယ်လုနီးပါးဖြစ်နေသော တိရစ္ဆာန်နှင့် အပင်မျိုးစိတ်အချို့ နေထိုင်ကြသည်။ Sällevadsån သည် Emån ၏ ရေစနစ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ လျင်မြန်သောရေစီးကြောင်းဆိုသည်မှာ ပွင့်နေသောရေကို ဆိုလိုသည်။
Stensryd är ett reservat med naturskogsartad skogs- och myrmosaik. Reservatet består av mager hällmarkstallskog, öppna fattigkärr, sumpskogar och en tallmosse. Skogen är gles och har en
သစ်ခုတ်သမားများနှင့်ဖုံးလွှမ်းထားသည့်ကျောက်တုံးကျောက်ခဲများပတ်ပတ်လည်တွင်ရပ်နေသောထင်းရှူးပင်ဟောင်းများပါ ၀ င်သောပကတိသစ်တော။ Björnnäset၏သဘာ ၀ သိုက်သည်ebkebosjönရှိ headland တွင်တည်ရှိသည်။ အရံတည်ရှိသည်